Sida loo soo celiya iPhone ka dib markii jailbreak
> Resource > iPhone > Sidee soo celinta iPhone ka dib markii jailbreak
Si kasta oo ay u soo celin aan iPhone 4 content ka dib markii JAILBREAK?
Waxaan lahaa iPhone 4 jailbroken. Ka dib markii in, dhammaan waxyaabaha aan iPhone 4 lumeen! Waxaan u baahanahay xiriirada aan dib si degdeg ah. Waxaa aad muhiim u ah ii. Ma jiraa hab kasta oo waxaan kuu soo celin karaa iPhone iyo aad u hesho waxa ku jira dib? Thanks advace.
Haddii aad synced aad iPhone la Lugood hor JAILBREAK ah, ma ahan wax dhibaato ah. Waxaad isticmaali kartaa iPhone gurmad shawladda in ay dib u helaan waxyaabaha ku jira oo dhan, oo ay ku jiraan xiriiro, sawiro, videos, SMS, qoraalada, soo wac taariikhda, iwm, laakiin hal wax oo aad niyadda ku hayaan inay waa in aan si hagaagsan aad iPhone la Lugood ka dib markii aad laga badiyay oo dhan ka kooban, ama xogta aad hore la overwritten doonaa oo aad waligaa u heli doonin dib. Iyadoo tan maskaxda, aynu hubi tallaabooyin faahfaahsan hoos ka wada.
Sida loo soo celiyo aad iPhone ka dib markii JAILBREAK ah
First of dhan, hesho qalab celinta iPhone. Haddii aanad haysan mid ka mid ah weli, halkan waxaad heli kartaa aan soo jeediyo: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (dadka isticmaala Windows), barnaamij lagu kalsoonaan karo oo kuu ogolaanaya in aad si ku eegaan oo soo kabsado xiriirada hore, SMS, qoraalo, sawiro, videos iyo in ka badan. Oo intaas oo dhan aad qaadataa dhawr talaabo oo kaliya in la soo celiyo iPhone ka JAILBREAK.
Download version maxkamad free of iPhone soo celin software hoose si aad u leeyihiin isku day ah.
Fiiro Gaar ah: Waxaa intaa dheer, labada versions of barnaamijka sidoo kale u oggolaadaan in aad dib ilaa xogta iPhone on computer ka hor inta aadan, waa lumin, oo dib u soo ceshano ka dib markii aad waa lumin.
Next, aynu qaadan version Windows ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka sida isku day ah in tallaabooyinka.
Tallaabada 1. Dooro habka soo kabasho iyo Macdan gurmad Lugood ah
Ka dib markii ay ku rakibidda barnaamijka, waxa maamula on your computer oo waxaad heli doontaa suuqa kala hoose.
Halkan aad iPhone oo dhan gurmad files waxaa la helay iyo bandhigay si toos ah in liiska. Dooro mid ka mid ah taariikhda ugu dambeeyay oo guji "Start Scan" Macdan gurmad u geli karin.
Tallaabada 2. RestoreiPhone 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4s / 4 / 3GS ka JAILBREAK
Ka hor inta soo kabashada, waxaad ka mid ah ku eegaan karo oo dhan ka kooban hore oo mid ka mid ah si ay u go'aamiyaan mid aad u baahan tahay, markaas calaamadee kuwa aad rabto oo guji "Ladnaansho". Waad soo celinta oo dhan oo iyaga ka mid haatan.
Sidaa darteed, gurmad aad u muhiim ah, wax aad isticmaalayso iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, ama qoraalkii kale. Waxa kaliya ee aad dhowr daqiiqo qaadataa, sidaa sameeyaan gurmad aad iPhone inta badan.
Daawo tutorial video hoose
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad soo dhoofsadaan xiriirada soo kabsaday, video iyo sawiro dib si aad u iPhone, waxaad isticmaali kartaa Wondershare TunesGo loo sameeyo in qasabno yar.
iPhone Xaday: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Khasaaray / Xaday iPhone
Sida loo Waraaqda iPhone Call Taariikhda
iPhone 6s (Plus) taariikhda Release 2015: Marka aad ka heli kartaa 6s ka iPhone (Plus)?
All About Dhiqlaha ee macruufka 9 Beta aad u baahan tahay inaad ogaatid
10 Waxyaabaha la sameeyo la iPhone qufulan
Sida loo dayactir Dhibaatooyinka Reception iPhone
Top 5 Su'aalaha Inta badan-weydiiyay iPhone nidaameed